Nandidy ny masoivohom-panjakana foibe sy ny orinasam-panjakana i Shina mba hamindra amin'ny Linux sy PC avy amin'ny mpanamboatra eo an-toerana | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 05/05/2022 18:49 | Nohavaozina tamin'ny 12/05/2022 23:05 | About us
Araka ny Bloomberg, Mikasa ny hampitsahatra ny fampiasana solosaina sy rafitra fiasan'ny orinasa vahiny i Shina ao anatin'ny andrim-panjakana sy ny orinasam-panjakana ao anatin'ny roa taona, manamarika ny iray amin'ireo ezaka mahery vaika indrindra nataon'i Beijing hatramin'izao mba hanesorana ny teknolojia vahiny.
Taorian'ny herinandro fialan-tsasatra tamin'ny volana Mey, Nasaina nanolo solosaina vahiny ny mpiasa miaraka amin'ny solosaina eo an-toerana mampiasa rindrambaiko miasa novolavolaina tao amin'ny firenena, hoy ny olona mahafantatra ny tetikasa.
Ao anatin'ny ezaka hanohanana ireo mpanamboatra PC eo an-toerana sy mpamorona rindrambaiko ary hampihena ny fiantraikan'ny sazy mety hitranga amin'ny governemanta tandrefana, namerina ny baikony ny governemanta Shinoa hanoloana PC sy rindrambaiko misy marika avy any ivelany ampiasain'ny masoivoho, governemanta ary orinasa tohanan'ny fanjakana miaraka amin'ny teknolojia eo an-toerana. ao anatin’ny roa taona.
Lenovo dia orinasa sinoa izay manamboatra solosaina sy mpizara solosaina, ankoatra ny zavatra hafa. Naorina tamin'ny 1984 avy amin'i Liu Chuanzhi, nalaza eran'izao tontolo izao ny marika tamin'ny taona 2005 rehefa nahazo ny fizarana solosaina manokana an'ny IBM izy, ka lasa mpanamboatra PC malaza indrindra eran-tany.
Raha manolo ny Dell amin'ny Windows ho an'ny Lenovo amin'ny Linux dia toa maka fanahy ho an'ny orinasa sinoa, toa mbola tsy nahavita izany ny firenena hatramin'izao, saingy toa manana hery bebe kokoa io hetsika vaovao io.
Misy antony maro nahoana ny governemanta Shinoa no maniry ny hifindra amin'ny teknolojia eo an-toerana ny firenena. VOALOHANY, te hitazona ny vola sinoa ao Shina ary tsy mahita izany mikoriana any amin'ny orinasa vahiny. Faharoa, rehefa avy nianatra ny lesona tamin'ny famoretana nataon'i Huawei, tianao ho azo antoka fa tsy miankina amin'ny teknolojia novolavolaina sy namboarina tany an-kafa ianao. Indrindra indrindra, ny teknolojia izay mety ho voarara tsy hampidirana any Shina.
Tsarovy fa noho ny ady Rosiana-Okrainiana, norarana ny orinasa tandrefana tsy hanao raharaham-barotra amin'i Rosia: nisy onjam-pandikana tsy nampoizina ny fifanarahana tamin'ireo orinasa Rosiana nanaraka izany. Noho izany dia mamela ao anaty fahasahiranana ireo orinasa Rosiana rehetra izay nametraka ny fitokisany tamin'ny teknolojia na orinasa tandrefana.
Ny ankamaroan'ny PC amidy eran-tany dia mivory any Shina, fa mitondra marika avy any Etazonia na Eoropeana. Ny governemanta Shinoa sy ny orinasam-panjakana koa dia mampiasa solosaina marika Dell sy HP vita any Shina. Na izany aza, toa izany Ny marika eo an-toerana ihany no tadiavin'i Beijing toa an'i Lenovo, Inspur, Mpanorina, Tsinghua Tongfang any amin'ny biraom-panjakana sy orinasam-panjakana.
SAP dia nampiato ny varotra rehetra tany Rosia tamin'ny fiandohan'ny volana martsa mifanaraka amin'ny sazy iraisam-pirenena. Nilaza ny SAP, orinasa goavam-be rindrambaiko fa hampiato ny varotra rehetra ao amin'ny firenena. Ny sazy ara-toekarena an'i Rosia dia rafitra manan-danja amin'ny ezaka hamerenana ny fandriampahalemana. ENY
Heverina fa mitaky ny fanoloana solosaina manana marika vahiny 50 tapitrisa farafahakeliny, izay asaina hosoloina fitaovana avy amin'ny mpanamboatra sinoa.
Amin'ny ankapobeny, tsy olana ny fanamboarana PC misy marika sinoa ho an'ny mpanamboatra sinoa. Ny fanamby lehibe indrindra ary iray amin'ireo antony lehibe mahatonga an'i Shina mbola hiantehitra amin'ny teknolojia vahiny dia ny fanoloana ny lozisialy Amerikana sy Eoropeana amin'ny solontena sinoa. Misy fizarana Linux maromaro novolavolaina ao Shina, toy ny Red Flag Linux novolavolain'ny Red Flag Software sy Kylin novolavolain'ny National University of Defense Technology, izay mety hisolo ny Windows sy/na Linux any ivelany ho an'ny mpampiasa sasany.
Misy ihany koa ny safidy ho an'ny Microsoft Office sy ny fampiharana hafa fampiasa matetika, toy ny Adobe Photoshop. Na dia tsy mahazo aina loatra aza ny fampiasana azy toy ny tany am-boalohany ary ny fahaiza-manaony dia ambany noho ny tany am-boalohany, dia mbola afaka mamita ny asa izy ireo (fa tsy amin'ny tranga rehetra).
Ny olana dia izay misy rindrambaiko matihanina maro novolavolaina nandritra ny am-polony taona maro izay tsy misy safidy hafa izay manolotra fahaiza-manao sy endri-javatra mitovy. Ny programa ampiasaina amin'ny famoronana votoaty, ny famolavolana amin'ny ordinatera (CAD), ny automatique amin'ny famolavolana elektronika, ny fijerena matihanina (ProViz), ny fanovana horonan-tsary, ny famokarana horonan-tsary, ary ny fampiharana maro hafa dia tsy azo soloina.
Izany no antony nahazoan’ny orinasan’ny haino aman-jery sy ny fiarovana ny fahazoan-dalana manokana hividianana fitaovana avy any ivelany. Mandritra izany fotoana izany, ny governemanta Shinoa dia tsy vitan'ny hoe maniry ny mpiasany manokana hifindra amin'ny programa Shinoa, fa mitaky ihany koa ny hampitsaharana ny fampiasana rindrambaiko amerikana sy Eoropeana ny orinasam-panjakana sy tohanan'ny fanjakana.
Araka ny angona vonjimaika, ny prescription dia tsy mihatra amin'ny singa sarotra soloina, toy ny processeurs. Na dia eo aza ny fivoaran'ny chips an'i Shina, ny ankamaroan'ny mpanamboatra sinoa dia manohy mampiasa processeur Intel sy AMD amin'ny PC. Soso-kevitra ny hanolo ny rindrambaiko Microsoft amin'ny vahaolana mifototra amin'ny Linux novolavolain'ny mpanamboatra sinoa.
Taorian'ny fampahalalam-baovao momba ny hetsika nataon'ny governemanta Shinoa, ny anjaran'ny HP sy Dell, izay mitana ampahany lehibe amin'ny tsena Shinoa, dia nidina manodidina ny 2,5%. Raha ny ampahany amin'ny mpanamboatra sinoa toa an'i Lenovo, Inspur, Kingsoft ary Standard Software, ny mifanohitra amin'izany, dia niakatra ny vidiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Nandidy ny masoivohom-panjakana foibe sy ny orinasam-panjakana i Shina mba hamindra amin'ny Linux sy PC avy amin'ny mpanamboatra eo an-toerana